Izizathu ezijulile ezashukumisela uMarcus Garvey ukuthi akhuthaze uhlelo olukhethekile lwabantu abaMnyama / abaMnyama: UMarcus Garvey wayengumbukeli onolwazi, wasibuka kakhulu futhi phansi uhlelo lwezemfundo e-United States.
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: May 11, 2020 13: 52 Awekho amazwana
Waphetha ngokuthi lolu hlelo lwadicilela phansi abamnyama / ama-Afrika; futhi ngenxa yalokho ayikwazanga ukubavumela ukuba bakhule: angeke saneliseke ngohlelo lwemfundo lwabamhlophe, s ... Funda kabanzi
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Ngo-Ephreli 18, 2020 00: 44 Awekho amazwana
Umsebenzi oyinhloko waseyunivesithi uthi "Ucwaningo", umuntu ozibiza eyunivesithi kuthiwa ungumcwaningi, kumele abe namandla okufakazela lokho. L ... Funda kabanzi
I-Covid-19 Imephu Yomhlaba wonke e-KL ngawe - Qhafaza kumephu ukuthola amacala bese uqinisekisa ukushona kwezwe, indawo noma izindlela zokuhamba. ICoronavirus (COVID-19) iyathinta ... Funda kabanzi
Umsebenzi wokukhumbula: luvelaphi uMashi 8th? Mashi 8, ingabe usuku lowesifazane noma lowesifazane osebenzayo ??
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: March 8, 2020 03: 10 Awekho amazwana
Ngabe siyabakhumbula abasebenzi baseNew York abashona ngomlilo wefektri yezindwangu ngonyaka we-1908, noma lo mlilo uyinganekwane? Ingabe iJalimane uClara socialist ... Funda kabanzi